Kedu ihe bụ baccalaureate mba ụwa? | Nhazi na ọmụmụ ihe
Kedu ihe bụ baccalaureate mba ụwa?
Maite Nicuesa | 02/01/2022 22:12 | Emelitere ka 02/01/2022 22:17 | Ọmụmụ
El International Baccalaureate Ọ bụ mmemme na-enye ọzụzụ zuru oke. A zụrụ ụmụ akwụkwọ na gburugburu ebe na-akwalite ntụgharị uche, echiche siri ike na imepụta ihe. Ụmụ akwụkwọ na-enweta akụrụngwa na ngwa ọrụ iji chee ihe ịma aka na ihe ịma aka nke ịdị adị.
Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị ahụ gụnyere atụmatụ a na onyinye agụmakwụkwọ ha nwere ikike kwekọrọ na ime ya. Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ndị nwere nkwado a bụ akụkụ nke ụlọ akwụkwọ IB ụwa.
1 Ọzụzụ nke kacha mma na mgbado anya mba ụwa
2 Ọzụzụ na-akwalite ajụjụ na nyocha
Ọzụzụ nke kacha mma na mgbado anya mba ụwa
Tupu ịnweta nnabata a, etiti ahụ na-etinye akwụkwọ anamachọihe ya na mmemme ọ chọrọ ikuzi. Na, mgbe ịmalitere usoro ahụ, chere maka nzaghachi kwekọrọ. Kedu akụkụ dị na mkpebi ikpeazụ? Ọ dị mkpa na ndị otu nkuzi nwere nkà na ihe ọmụma dị mkpa iji nye nkuzi dị mma.
Àgwà nke dabara na ịdị mma nke na-achọpụta Baccalaureate International. Ụkpụrụ ndị na-eme dị ka eriri nkịtị na International Baccalaureate na-ahapụ akara dị mma n'ụwa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha bụ ụkpụrụ ndị na-akwalite iwu obodo na-emekọ ihe ọnụ na-agba mbọ maka ọdịmma ọha.
A zụrụ ụmụ akwụkwọ na ebe mmụta nke na-azụlite uche mepere emepe. Nwa akwụkwọ ọ bụla nwere ike ịpụ na mpaghara nkasi obi ha iji chọpụta ihe ndị ọzọ dị adị, isi ihe na echiche dị iche iche. Aha mmemme n'onwe ya na-akọwa isi ya: nwere agwa mba ụwa. Na n'okwu a, mmadụ na-enweta ọhụụ nke na-amalite site n'echiche dị egwu, ọchịchọ ịmata ihe, ndidi, ịdị umeala n'obi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụ ọzụzụ na-eburu n'uche mgbanwe dị n'okwu ahụ. N'ụzọ dị otú a, nwa akwụkwọ ahụ na-achọta azịza na ngwá ọrụ iji mee mkpebi n'ihe gbasara ọnọdụ ndị e debere na ebe a na ugbu a. Oge akụkọ ihe mere eme ọ bụla nwere njirimara na ọnọdụ nke ya. Ọzụzụ mba ụwa na-eji mkpa nke ụdị dị iche iche akpọrọ ihe na, kwa, nzute na-ebilite gburugburu ihe na-ejikọ mmadụ.
Ọzụzụ na-akwalite ajụjụ na nyocha
Ụmụ akwụkwọ na-enyocha eziokwu karịrị echiche nke ha. Ha na-eji echiche ndị ọzọ na-egosipụta ụkpụrụ na isi echiche na-emekọ ihe na-agbasa ahụmahụ ndụ ha na ọdịdị omenala ha. Nwa akwụkwọ ahụ na-ekere òkè dị ukwuu n'ịmụ ihe. Ị na-abịaru nso na eziokwu iji chọpụta ohere ọhụrụ. Ọzụzụ a na-ewere ọnọdụ na ọnọdụ nke na-akwalite mmekorita na imekọ ihe ọnụ.
Ọmụmụ nwere ike ọ bụghị naanị inwe echiche zuru ụwa ọnụ na nke zuru oke, kamakwa nke mpaghara. N'ihi nke a, a na-ejikọta mmemme ahụ na nkà ndị na-eme ka ụdị kachasị mma nke mmadụ dịkwuo mma ma bụrụ nri maka nkà. A na-ahazi nkà ndị a na mpaghara mmekọrịta na mmekọrịta, na ngalaba echiche na ngalaba nke nzikọrịta ozi. Innovation bụ otu n'ime okwu ndị dị ugbu a n'ụlọ akwụkwọ na-enye mmemme Baccalaureate International.
Mmemme Diploma bụ otu n'ime atụmatụ ndị bụ akụkụ nke International Baccalaureate. Ezubere ya maka ụmụ akwụkwọ nọ n'agbata afọ 16 na 19. Kedu isiokwu bụ akụkụ nke mmemme? Ọrụ na ọrụ, Monograph, Creativity na Theory of Knowledge bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị a. Echiche ndị e gosiri n'isiokwu a na-ezo aka n'isi isiokwu.
Ụmụ akwụkwọ na-agbasawanye ihe ọmụma ha, ma na-etokwa dị ka ndị nweere onwe ha na ndị nwere ọrụ. Ụkpụrụ omume dị nnọọ ugbu a na ọzụzụ nke na-ahapụ akara dị mma na ọha mmadụ. Ụmụ akwụkwọ na-abịaru nso na okike, nyochaa eziokwu ya. Ma ha na-ewepụtakwa oge maka ịdọ aka ná ntị dị oke mkpa nke nwere akụkụ nkà ihe ọmụma: echiche nke ihe ọmụma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Ọmụmụ » Kedu ihe bụ baccalaureate mba ụwa?
Kedu ọkwa dị elu dị?
Kedu ihe mmụta gbasara mmadụ na-amụ?